Sheekh Xasan Turki Badbaadiya
Home Opinion Sheekh Xasan Turki Badbaadiya
Sheekh Xasan Turki Badbaadiya, Waxaan qirayaa in uu Eebbe hayo badbaadada; innaguse sabab ayaan u noqon karnaa waase haddii aan leennahay dareen wax hambeeya. Sheekh Xasan-Turki waa wadaad Soomaaliyeed oo ku tilmaaman arrimaha kala ah.-
Wixii ka horreeyey gugii 2006, wuxuu Jubbada Hoose ku haystay ciidan aad u tababbaran oo lala xiriiriyo ururka Al-Itixaad. Xilligaas waxaa bilowday kacdoonkii lagu diiddanaa qabqablayaashii bahdilay dadka Soomaaliyeed. Kacdoonkaasi waa uu dhicisoobi lahaa haddii aanu garab ka helin Sh. Xasan-Turki oo xilligaas Muqdisho la soo galay rag lagu qiyaasay 2500 dagaal-yahan. Waa kacdoonkii dhalay weedha ah ”lixdii bilood ee lixdanka sano”. Berigaas Soomaalida koonfureed gaar ahaan Reer Muqdisho way jeclaayeen wadaadka iyo xertiisa.
”Lixdii bilood ee lixdanka sano” waxaa iridda u xiray ciidankii Itoobiya ee caasimadda iyo dadkeediiba dumiyey. Halkaas waxaa ka curtay kacdoon kale oo la iskaga xoreynayo gumeysiga cusub. Dagaalkan wuxuu Sh. Xasan-Turki uga jiray kaalin weyn, wiilashii keymaha Jubbooyinka ka yimidna waxay ka dagaalayeen jidadka Xamar. Beryahaas, wadaadka iyo xertiisu aad bay uga sharfanaayeen Soomaalida dhexdeeda, gaar ahaan Reer Muqdisha.
Waxaa Jabuuti lagu soo dhisay dowladdii Sh. Shariif, waxaana agaheedii curtay ururka Shabaab oo dagaal weyn kala horyimid. Sheekh Xasan-Turki kama uu qayb-gelin dagaalkaas, balse godob la’aan ayuu xertiisii kula laabtay kayntii Jubbooyinka ee uu awal ka yimid
Xilligaas iyo wixii ka dambeeyey hankiisu waa uu siin waayey in uu ka qayb-qaato dagaallada fidnada ah. Lama uu soo safan ciidamo shisheeye iyo kuwa beeleed midna. Waxaase hub ka dhigis ku sameeyey oo welina haya ururka Alshabaab, mana ay jirin meel u dhaanta, oo xagga dowladda iyo dalalka deriska ahba dil ayuu uga xukunnaa.
Weligiis wadaadku ma aanu qiran ka mid ahaanshaha Alqaacidda, ama in uu shareecada islaamka u dhoofinayo dalal kale. Aragtidiisu waxay ku koobnayd badbaadada Soomaaliya, wax weynna waa uu qabtay.
Maanta! Sida ay saxaafaddu baahisay, Sh. Xasan-Turki isaga oo xanuunsanaya ayaa lagala cararay ciidankii Kenya ee qabsaday Kismaayo. Wuxuu yaallaa degmada Baraawe oo iyadana duullaan lagu sii yahay. Haddaba, wadaadkii hiilkaas laga helay ma mudan yahay in Sawaaxili sharaf-darani yiraa “Hii ni Xasan-turki” ee berrina la yiraa ‘badda ayaa lagu tuuray’.
Intii uu socday dagaalkii Boosniya iyo Seerbiya (1992 – 1994) waxaa Boosniya u soo gurmaday mujaahidiin shisheeye oo tira badan. Markii uu dagaalkii dhammaadayna lama dayacin, looma gacan-gelin ciidankii NATO ee dalka yimid ama kuwii Seerbiya. Balse madaxweynihii dalkaas (Alija Isetbegoofik) ayaa abaal-mariyey, siiyayna nooli ay dhulkoodii ugu noqdaan.
Innagu miyaan garannaa in aan sagootinno kuwii noo soo gurmay xilligii murugada?. Bal inta aanan kuwa shisheeye la gaarin, waxaan dowladda ugu baaqayaa in ay Sh. Xasan-turki u fidiso cafis, si uu u helo daweyn caadfimaad iyo in uu waayihiisa yar ku dhamaysto sharaf. Gaar ahaan dadka ay dowladdu dhex-deggan tahay ee Reer Muqdisho waxaan ugu baaqayaa in ay arrinkaas ka shaqeeyaan. Gob waa la yahay ee ha la gudo abaalkii Soomaalinnimo.
Caliqeyr M. Nuur , Caliqeyr@hotmail.com , Oslo, Norway.